न्याय नै महँगो भएपछि................. | चितवन पोष्ट दैनिक
न्याय नै महँगो भएपछि……………..
२०७० माघ १९, आईतवार ०३:२४ गते
अधिकारी दम्पतीको अनशन सय दिन पूरा[divider]
[dropcap]ना[/dropcap]रायणगढ । गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको करिव १० वर्ष हुन लागेको छ । तर पनि यो घटना अझै सेलाएको छैन । तीनै कृष्णप्रसादका बाबुआमा नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारी छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
पछिल्लो पटक उनीहरुले सुरू गरेको अनसनको १०० दिन शनिबार पूरा भएको छ । तर पनि यी वृद्ध दम्पतीले अझै न्याय पाएका छैनन् । उनको छोराको हत्यारालाई कारबाही भएको छैन । न्यायका लागि आमरण अनसन बसेको १०० दिन पूरा हुँदासमेत सरकारले हत्यारालाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिनतर्फ कुनै कदम चालेको छैन ।
पटकपटक अनसनमा बस्दै आएका उनीहरुले पछिल्लो पटक १०० दिनदेखि अनसनमा बस्दै आएका छन् । राजधानीको वीर अस्पतालमा नै अनसनमा बसेका उनीहरुको अनसन तोडाउनतर्फ सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै पीडितका आफन्तहरुले गुनासो गरेका छन् ।
अधिकारी दम्पतीलाई गाउँमै पुनसर््थापना गर्न सरकारले पहल गरिरहेका बेला परिवारका अन्य सदस्यहरुले न्याय नपाएको र शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था नभएको बताएका हुन् । कृष्णप्रसादकी हजुरआमा गौरीमाया र काका ठाकुरप्रसाद सुरक्षाको कारणले अनसनमा बसेका कृष्ण प्रसादका बाबुआमा गाउँ फर्किने अवस्था नरहेको बताए ।
‘दाइ भाउजू गाउँ फर्किएपछि सुरक्षा कसले दिने ?’, काका ठाकुरप्रसादले प्रश्न गर्दै भने, ‘गाउँ फर्किन पहिला सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुप¥यो ।’ पहिलो अनसन तोड्दा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार हत्यारालाई कारबाही भए पुनसर््थापनको विषयमा सोच्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारसँग दोषीलाई कारबाही गर्ने, अहिलेसम्म भएको चलअचल सम्पतिको क्षतिपूर्ति सरकारले बेहोर्ने, उपचार खर्च सरकारले प्रदान गर्ने र पुनसर््थापना गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
कृष्णप्रसादकी ७८ वर्षीया हजुरआमा गौरीमायाले सरकारले कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारबाही नगरेर अनसनमा बसेका छोराबुहारी मार्न खोजेको आरोप लगाइन् । ‘नातिलाई त खाए, अब छोराबुहारीलाई पनि खाने भए’, उनले भनिन्, ‘अब मेरो घरनै रित्तिने भो ।’
अनसनमा बसेका अधिकारी दम्पतीलाई अस्पतालमा अक्सिजन र स्लाइन दिएर बचाइ राखिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । अनसनमा बसेका उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको र कुनै पनि बेला ज्यान जान सक्ने अस्पतालका निर्देशक प्राडा बुलन्द थापाले बताए ।
‘उहाँहरुलाई अस्पतालमा अक्सिजन, स्लाइनले मात्र बचाइरहेको छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ, बेलैमा यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।’
गोरखा फुजेलका यी दम्पती आफ्ना कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने एक सूत्रीय माग राख्दै पटक–पटक अनसन बस्दै आएका छन् । उनीहरुले पछिल्लो पटक कात्तिक ८ गतेदेखि अनसन थालेका थिए ।
यसअघि पनि वीर अस्पतालमा ४८ दिनसम्म अनसनमा बसेका उनीहरुको अनसन तोडाउन सरकारले पीडितलाई न्याय दिने र हत्यारालाई कारबाही गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म उनीहरुले न्याय पाएका छैनन् ।
सोही क्रममा सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै अधिकारी दम्पतीको मागलाई सम्वोधन गरी खाना खुवाई जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । द्वन्द्वको समयमा तत्कालिन नेकपा–माओवादीले अधिकारीका कान्छा छोरा कृष्णप्रसादलाई विसं. २०६१ साल जेठ २१ गते रत्ननगरको जयमंगलामा हजुरबुबा हजुरआमालाई भेट्न आएको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले कयर खोलामा हत्या गरी बकुलहरमा ल्याई फालेका थिए ।
कृष्णप्रसादको २०६१ जेठमा चितवनको रत्ननगर बकुलर चोकमा अपहरण पछि गोली हानी हत्या भएको थियो । भाइको हत्यापछि कृष्णप्रसादका दाजु नुरप्रसादले हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जाहेरी दिएका थिए । पछि भाइको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै तत्कालिन माओवादीका ११ कार्यकर्ताहरु विरूद्ध उनले किटानी जाहेरीसमेत दिएका छन् ।
जाहेरीमा नाम किटान गरिएका पर्शुराम पौडेल र रामप्रसाद अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । यी दुईलाई फरकफरक समयमा पक्राउ गरी २४ दिन हिरासतमा राखेर गरिएको अनुसन्धान पूरा नभएको र आरोपीविरूद्ध ठोस प्रमाण नजुटेको भन्दै अदालतले मुद्दा अगाडि बढाउन इन्कार गरेको थियो ।
यसबीचमा उनीहरुको अनसन तोडाउनको लागि सरकारका प्रतिनिधिहरु अनसनस्थल वीर अस्पतालमा पटकपटक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरी बास्कोटा र गृहसचिव जनार्दन नेपाल चार चारपटक अनसन स्थल पुगेर अनसन तोड्न आग्रह गरे पनि अधिकारी दम्पतीले न्याय नपाउँदासम्म अनसन नतोड्न अडान लिएका छन् ।
यता एमाओवादीका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन जनपरिषदका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईले हत्याको जिम्मा तत्कालीन जनपरिषद प्रमुखको हैसियतले लिँदै आफूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न चुनौती दिएका थिए ।
चितवन प्रहरीले पनि हत्याको विषयमा अनुसन्धानलाई जारी राखेको बताउँदै आएको छ । हत्यामा थप तीन जनाको संलग्नता खुलेको भन्दै प्रहरीले ती तीन जना गोली हानी हत्या गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको समेत दावी गर्दै आएको छ ।